Sudanese gum arabic, spark yehupenyu kana coca-cola rombo? - Afrikhepri Foundation
Chishanu, Nyamavhuvhu 7, 2020
Sudan gum arabic, mararamiro ehupenyu kana checa-cola fortune?
The 16 February, pepanhau Sudan Tribune yakabudisa nyaya imwe chigadzirwa iyo Sudan ndiyo nyika guru mugadziri: chingamu Arabic. Under rokuti "Sudan aivigirwa matani 42 yechingamu Arabic muna US muna 2013-YEPAMUTEMO" pepanhau paakaudzwa chokwadi ichi pasina kuzombotaurazve kutsanangurwa, kana chii chingamu Arabic, kana ayo kukosha kuti nyika kana pamusoro vezvokutengeserana ukama vakaramba pakati Sudan uye United States, uye nekuichengete tisingatauri zita chikuru boka kuti chingamu Arabic kunokosha: Coca-cola.
Gum arabic yakakosha zvokuti kune Arab Gum Council muSudan: GAC. Icho chinangwa chekushandisa zvinhu zvakakosha zvikuru. Munyori General of GAC, Abdel-Magic Abdel Gadir, pachena kwakaratidza kuti Sudan aivigirwa 42 matani chingamu Arabic muna US muna 2013, rinomirira $ 103 miriyoni. Akazivisawo for pamusoro 55 2014 matani, apo achiwedzera kuti "muUnited States kuramba kupinza chingamu Arabic kubva Sudan sananga."
Nyaya yacho inotsanangura muchidimbu kuti "Sudan iri panhamba yepasi rinokurudzira ugandanga muUnited States kubva ku1993." Zvinotaurwawo zvakare kuti "Sudan inowanzonziwo zvigadziriswa zvehupfumi pasi rose kubvira 1997". "Zvisinei, muZ2010, US yakashuma kuregererwa kwezvigaro zvezvirimwa nemishonga, izvo zvaizobvumira makambani gumi kuwana mabhizimisi ekutengeserana."
Vamwe vakuru vakuru vehurumende veSudan vakaramba vachitaura kuti "makambani akawanda eUnited States ari kudzivisa zvikwereti zvezvemari kuburikidza nekugadzirwa kwemitemo yepamutemo" mune dzimwe nyika kuti avabatsire kuita "hupfumi hwekurima muSudan"
Nyaya yacho inozopedzisira inowedzera kuti "Sudan yakakwanisa kuisa kudzvinyirira kuUnited States kuburikidza neGum arabic kuitira kuti vasimudze zvigadziro, vachitaura kukosha kweizvi zvinyorwa zveMakero eNorth America". "IUnited States yakabvisa gum arabic kubva pamitemo, ichipa kukosha kunokosha kweizvi zvinyorwa zvezvokudya uye zvinodhaka."
Ndeipi chokwadi chakaipa kune zvose izvi?
Chingamu Arabic zvinokosha chezvinonhuwira zvokudya uye pharmacological maindasitiri, zvirokwazvo, ndizvo rokuti E414 chipo akawanda zvakafanana zvokudya. Iyo inoshandiswawo kuti inotaridzika kwayo kana kuti inopisa uye emulsifier kuita sweets gelatinous kana maruva emaguru. It ndeimwe pazvokudya pendi, madhayi, zvokufembedzwa, bhitumini, adhesives, bepa mudzanga, yokunamisa mishonga, kutsenga chingamu mumakenduru, waya, mafayawekisi ... Asi nyika guru nevatengi yechingamu Arabic ndiko Coca-cola, unoparadza zvakawanda shuga, kunyange zvinonyatsochengeta nhamba zvakaoma kuwana paIndaneti, zvichida nemhaka akakurumbira chakavanzika payakavakirwa ...
Izwi iri, iro rinozivikanwa segum acacia, rinowanzobudiswa muSahel, kubva kuSenegal kusvika kuSomalia, kunyange zvazvo irimwawo muArabia Peninsula. Kunyange zvakadaro, mu2007 somuenzaniso, Sudan, Chad neNiger chete zvinopa 95% yezvigadzirwa zvepasi. Sudan inobereka pamusoro pe80% yekugadzirwa kwegore negore, pasinei nekuchinja kuduku kubva kune rimwe gore kuenda kune rinotevera.
MuSudan Tribune article, zvimwe zvinhu zvinogona kuverengwa pakati pemitsetse:
- The Sudanese vachimanikidzwa kuti izvo nyaya inoreva musi 2007 apo Sudanese mumiriri kuna US, venhau, wacho akasimudza handigoni Coca-cola kubirikidza kuUnited States asisiri anopa gum arabic kana zvikwereti zvezvemari munyika yake zvisati zvasimudzwa. Mutemo chete wakasimudzwa wakanga uri pamusoro pe "chibereko chekurima". Izvo zvinotyisa zvakanga zvisingabatsiri, kunze kwekuti mumiririri uyu arasikirwa nebasa rake mugore irorochete ...
- Zvakawanda kutengeswa chinokosha ichi chaitwa kuburikidza pamusika dema zvisiri pamutemo. Vachiti "yepamutemo" wenyaya yacho zvinoreva mukufambisira nhaka Sudanese hurumende, zvino nhamba iyi kuti zvichida chiuru kana mumwe muverengwe ndibatsireiwo kunze kwenyika. Chingamu Arabic ndikoku 60 000 matani pagore. Asi Sudan inobereka 80% uye Coca-cola ... unopisa akawanda pamutemo nhoroondo pakati kunze kwenyika uye kupinzwa wakadenha purofiti pachena vamwe makwanza ...
- Pane zvimwe zvinhu, kunze kwemafuta uye gesi, izvo zvinokonzera hondo uye neocolonial-zvechisimba zvinotambudza munyika dzeAfrica.
- Coca-Cola ikambani yakasimba iyo hurumende yeUnited States inokwanisa kuchinja mitemo yenyika kuitira kuti iwane zvigadzirwa zvakasikwa.
-Zvirevo zveSudan hazvitauri zita reCoca-Cola. Iyi kambani inokurudzira nokutaura kuti zvinhu zvose mufaro, ne coke iri muruoko, zvinoratidzika zvakadaro, muhupenyu chaihwo, kuparadzira kutya kupfuura mufaro.
Dudziro: Collectif Investig'Action
Apollonius weTyana aive "wechokwadi" Kristu here?
CAMEROON: Obituary: Kadji "aive murume mukuru, murume mukuru kwazvo"